Bit By Bit - Fankasitrahana
Ity boky ity dia manana ny toko iray manontolo eo amin'ny fiaraha-miasa faobe, fa ity boky ity mihitsy ny fiaraha-miasa faobe. Tena fotsiny ity boky ity dia tsy misy raha tsy noho ny malala-tanana maro mahafinaritra fanohanana ny olona sy ny fikambanana. Noho izany, tena velom-pankasitrahana aho.
Olona maro no nanome Fanamarihana Mahakasika ny iray na maromaro amin'ireo toko na efa nampahazo miresaka amiko momba ny boky. Feno fankasitrahana aho Solon Baracas, Tom Boellstorff, Clark Bernier, Michael Bernstein, Megan Blanchard, Josh Blumenstock, Dalton Conley, Yo-Yo Chen, Ethan Fast, Nick Feamster, Cybelle Fox, Maggie Frye, Sharad Goel, Jake Hoffman, Joanna Huey , Patrick Ishizuka, Ben Jones, Dawn Koffman, Sasha Killewald, Harrissa Lamothe, Andrés Lajous, David Lee, Amy Lerman, Meagan Levinson, Andrew Ledford, Shaddai Li, Karen Levy, Ian Lundberg, Xiao Ma, Andrew Mao, John Levi Martin, Judie Miller, Arvind Naranyanan, Gina Neff, Cathy O'Neil, Nicole Pangborn, Ryan Parsons, Devah Pager, Arnout van de Rijt, David Rothschild, Bill Salganik, Laura Salganik, Christian Sandvig, Mattias Smångs, Sid Suri, Brandon Stewart, Michael Szell, Sean Taylor, Florencia Torche, Rajan Vaish, Taylor Winfield, Han Zhang, ary Simone Zhang. Tiako ihany koa ny misaotra ireo mpianatra ao bola ary 503 ao amin'ny Lohataona 2016 noho ny mamaky ny tany am-boalohany ny dikan-sora-tanana, ary ny mpianatra amin'ny antokony nandritra ny taona maro izay no nanampy endrika maro ny hevitra ao amin'ity boky ity.
Nanana boky sora-tanana iray mahavariana atrikasa izay nokarakarain'ny amin'ny nampiantrano ny Princeton ny Foibe ho demokratika ny Fianarana ny Politika. Te-hisaotra Marcus Talohan'ny sy Michele Epstein noho ny fanohanana ny fihaonambe. Ary, Tiako ny hisaotra rehetra ny mpandray anjara, izay naka fotoana amin'ny be atao aza mba hanampy ahy hanatsara ny boky: Elizabeth Bruch, Paul DiMaggio, Filiz Garip, Meagan Levinson, Karen Levy, Mor Namàna, Sean Taylor, Markus Talohan'ny, Jess Metcalf, Brandon Stewart, Duncan Watts, ary Han Zhang. Tena nahafinaritra be ilay andro, ary manantena aho fa afaka aho ny hamiliantsika làlana ny sasany ny fahendrena avy izay efitra ho any amin'ny farany sora-tanana.
Vitsivitsy ny olona hafa mendrika fisaorana manokana. Duncan Watts ny dissertation no mpanoro hevitra, ary dia ny dissertation fikarohana izay nahatonga ahy hahatakatra ny fomba mampientam-po io karazana fikarohana mety ho; tsy misy ny zava-nitranga izay nahazo diplaoma tao an sekoly ity boky ity dia tsy misy. Paul DiMaggio no olona voalohany mba hampahery ahy hanoratra ity boky ity. Izany no nitranga indray tolakandro rehetra izahay raha mbola samy miandry ny kafe milina in Wallace Hall, ary mbola mahatsiaro fa niakatra mandra-pahatongan'ny andro izany, ny hevitra ny fanoratana ny boky tsy mbola tafita ny saiko. Indraindray raha mbola tena nanoratra ity boky ity no nanozona an'i Paoly ny soso-kevitra, fa ankehitriny Feno fankasitrahana lalina aho ho azy noho ny mandresy lahatra ahy fa nanao ny marina aho, manan-kolazaina sy ny olona ho liana. Tiako ihany koa ny misaotra Karen Levy noho ny saika namaky ny toko rehetra ao amin'ny voalohany ka messiest teny; izy nanampy ahy hahita ny sary lehibe aho rehefa niraikitra tao amin'ny ahi-dratsy. Te-hisaotra Arvind Narayanan noho ny fanampiany ahy mifantoka sy hanadio ny hevitra ao amin'ny boky ny sakafo mahatalanjona maro. Brandon Stewart dia faly foana ny hiresaka na hijery ny toko, sy ny fomba fijery sy ny fampaherezana sy miaro ahy handroso hatrany, na dia fony aho nanomboka ny voatarika sideways. Ary, farany, tiako ny hisaotra Marissa King noho ny fanampiany ahy tonga amin'ny lohateny io boky iray any New talaky masoandro tolakandro Haven.
Raha fanoratana ity boky ity, dia nandray soa avy tamin'ny fanohanana ny telo mahagaga andrim-panjakana. Voalohany, ao amin'ny Oniversiten'i Princeton, feno fankasitrahana aho ny ny mpiara-miasa aminy sy ny mpianatra ao amin'ny departementan'i l'bola ary noho ny famoronana sy ny fihazonana ny mafana sy hanohana ny kolontsaina. Tiako ihany koa ny misaotra ny Center for Information Technology for Policy manaporofo mahafinaritra ahy ara-tsaina an-trano faharoa izay afaka hianatra bebe kokoa momba ny fomba solosaina mpahay siansa mahita izao tontolo izao. Ampahany amin'ity boky ity izay voasoratra raha mbola teo amin'ny sabatika avy any Princeton. Voalohany, tiako ny hisaotra Microsoft Research, New York City noho ny an-trano tamin'ny 2013-14. Jennifer Chayes, David Pennock, ary ny siansa ara-tsosialy rehetra vondrona kajy amin'ny solosaina, dia mahafinaritra sy ny mpiara-miasa aminy maro. Faharoa, tiako ny hisaotra Cornell Tech noho ny an-trano tamin'ny 2015-16. Dan Huttenlocher, Mor Namàna, sy ny olona rehetra tao amin'ny Social Technologies Lab nanampy ho Cornell Tech ny tontolo iainana tonga lafatra ho ahy ny mahavita boky ity. Amin'ny lafiny maro ity boky ity dia mikasika ny natambatra hevitra avy amin'ny tahirin-kevitra ara-tsosialy siansa sy ny siansa, ary mihevitra aho fa na Microsoft Research sy Cornell Tech dia modely toy izany ny ara-tsaina hazo fijaliana vovoboniny.
Raha fanoratana ity boky ity, dia nanana fikarohana tsara fanampiana avy amin'ny olona telo. Feno fankasitrahana aho Han Zhang, indrindra ho Mpanampy manao ny kisary ao amin'ity boky ity. Feno fankasitrahana aho Yo-Yo Chen, indrindra ho an'ny fandrafetana ny fanampiana ny asa ao amin'ity boky ity. Farany, Feno fankasitrahana aho Judie Miller, indrindra fa ny fanampiana Notsaraina sy Tracking nidina karazana fitaovana rehetra avy amin'ny fitehirizam-boky.
I nahazo manampy feedback ny hevitra ao amin'ity boky ity amin'ny maro ny lahateny. Te-hisaotra ny mpikarakara sy ny mpandray anjara amin'ny manaraka ireto zava-niseho: Cornell Tech Connective Media Seminar, Princeton Center for ny Fianarana ny Demokratika Politika Seminar, Stanford HCI colloques, Berkeley bola ary colloques, Russell Sage Foundation miasa Group tamin'ny kajy amin'ny solosaina, Social Science, Princeton DeCamp Bioethics Seminar, Columbia hamaroan'isa Fomba ao amin'ny Siansa Sosialy Visiting gazety Series, Princeton Center for Information Technology Policy Teknolojia sy Society Reading Group, Simons Institute for ny teorian'ny computing atrikasa amin'ny New Directions in kajy amin'ny solosaina, Social Science & Data Science, Data sy Society atrikasa, Oniversiten'i Chicago, bola ary colloques, International Conference tamin'ny kajy amin'ny solosaina, Social Science, Data Science ao amin'ny Microsoft Sekoly Summer fikarohana, sy ny Fikambanana ho an'ny indostria sy ny Applied Matematika (Siam) Fivoriana isan-taona.
Ny tranonkala dika amin'ity boky ity dia noforonina ny Lioka Baker, Paul Yuen, sy Alan Ritari ny Agathon Group. Niara-niasa taminy tamin'ny tetikasa io dia fahafinaretana, toy ny mahazatra. Ny iray ny toerana tena zavatra momba ny tetikasa miara-dia fa mbola mianatra avy amin'ny fiarahamiasa. Tiako indrindra Te-hisaotra Lioka noho koa ny fampandrosoana ny manaova dingana noho ity boky ity, ary manampy ahy hamakivaky ny maizina zorony git, pandoc, ary hanao.
Ity boky ity sy ny miaraka tranonkala noforonina tamin'ny maro ny loharano misokatra tetikasa. Te-hisaotra ny mpandray anjara ho amin'ny manaraka tetikasa: git, pandoc, pandoc-crossref, pandoc-citeproc, pandoc-citeproc-sasin, petra-kevitra, Middleman, Bootstrap, Nokogiri, GNU ho, Vagrant, Ansible, LaTeX, ary Zotero. Rehetra kisary ato amin'ity boky ity dia nohariana araka R (Team 2016) , ary nampiasa ny manaraka fonosana: ggplot2 (Wickham 2009) , dplyr (Wickham and Francois 2015) , reshape2 (Wickham 2007) , stringr (Wickham 2015) , fiara (Fox and Weisberg 2011) , cowplot (Wilke 2016) , PNG (Urbanek 2013) , Grid (Team 2016) , ggrepel (Slowikowski 2016) , sy ny emojifont (Yu 2016) . Tiako ihany koa ny misaotra Kieran Healy noho ny bilaoginy izay natao ahy nanomboka tamin'ny pandoc. Ary, Tiako ny hisaotra Arnout van de Rijt sy David Rothschild noho ny fanomezana tahirin-kevitra ampiasaina mahary ny sasany amin'ireo kisary amin'ny taratasy, ary tiako ny hisaotra Josh Blumenstock noho ny fanaovana antontan-taratasy replication-bahoaka ny taratasy.
Princeton ao amin'ny University Press, tiako ny hisaotra Eric Schwartz izay nino tetikasa ity am-piandohana, ary Meagan Levinson, izay nanampy manao azy ho tena zava-misy. Meagan no tonian-dahatsoratra tsara indrindra fa ny mpanoratra mety manana; Tsapako toy ny foana izy teo mba hanohana tetikasa ity, amin'ny fotoana tsara sy ny ratsy fotoana. Ary, ankehitriny, rehefa mahita ny tenako tamberina manome ho an'ny hafa, dia hanao ny tsara indrindra mba hamiliantsika làlana ny Meagan ny manorina sy ny fomba tsara.
Farany, Te hisaotra ny namany sy ny fianakaviany. Ianao dia efa manohana io tetikasa io amin'ny fomba maro, matetika amin'ny fomba izay tsy dia mahalala. Tiako indrindra fa te-hisaotra ny ray aman-dreny, Laura sy Bill, ary ny ray aman-dreny-in-lalàna, Jim sy Cheryl, noho ny tsy misy fiafarana fanohanana ity tetikasa ity raha mbola nandroso sy tamin'ny ary tamin'ny. Tiako ihany koa ny misaotra ankizy. Ely sy Theo dia tsy mbola nangataka ahy imbetsaka ny boky, rehefa ho vita amin'ny farany. Eny ary, ny valiny dia izao. Ary ny tena zava-dehibe, Te-hisaotra Amanda vadiko. Fantatro fa ity tetikasa ity anjara be dia be ny soa sy ny ratsy, ary Izaho ho feno fankasitrahana foana noho ny tsy-hihozongozonany ny fitiavana sy ny fanohanana.